Abu Dhabi - inhlanganisela eMpumalanga naseNtshonalanga
Kunzima ukucabanga ukuthi phakathi emifuleni akhanzingiweyo, zingakhula ezingwadule oyinyumba idolobha enhle, ehlanzekile landscaped. Inhloko-dolobha ye-United Arab Emirates - Abu Dhabi - is abatelekile ngengcebo yayo enkulu, yesimanjemanje, ikhono ukuhlanganisa isiko kanye namasiko abantu bakhe ngentuthuko zobuchwepheshe zamanje. Kulomuzi, uwahlanganise ngokuhlakanipha nayo esikhathini esidlule, zamanje nezesikhathi esizayo. izakhiwo Old kanye amathempeli ahlalisane nama izikhungo okusezingeni eliphezulu ibhizinisi. Yonke indawo ebusa ihlanzekile futhi icocekile, isibalo esikhulu sezithunjwa izikhala green muhle kakhulu, futhi imfundo obukhulu emithonjeni ezihlukahlukene ngeke bavunyelwe ukufa ngenxa yokushisa, ngisho ngosuku ezishisayo.
Abu Dhabi - emaningi we Emirates, akumangalisi, ngoba ubuhle kanye nekhwalithi yempilo kuphela Al Ain ingafaniswa naye. Abadali lomuzi kwakumelwe bazikhandle, ngoba kuphela ukugcinwa ukusebenza emasimini lapho umi bazithela njalo ehlathini, isihlahla, zezimbali, le njongo abathintekayo izitshalo kungeyona. Izakhiwo zikanokusho kunazo tibheke eduze lolwandle, izakhiwo ocebile nazo elise emgwaqweni Sheikh Hamdan, Khalifa Zayed, zingabantu parallel nomunye.
Kulomuzi amathempeli eziningi kangaka Muslim abanizungezayo. Kodwa kukhona umbono ongavamile kakhulu - lamaSulumane omkhulu e Abu Dhabi, Sheikh Zayed eyakhelwe. Lena ngenye yama-izindawo ezibaluleke kakhulu Muslim emhlabeni. Mosque ngesikhathi esifanayo ngaphansi kophahla ingaqoqa ezingaphezu kuka-40 eziyinkulungwane zakhe ezithembekile, lihlotshiswe a amakholomu ayizinkulungwane, 82 domes, izibani ezilengayo, esesabekayo kakhulu okhaphethi ngezandla, eyayibhalwe ngegolide leaf. Isevisi kuqala kwakungumprofethi yokungcwaba le nkosi - Sheikh Zayed. Isakhiwo izungeza pool, isibuko-like ebusweni onikeza imfihlakalo mosque. Ngohlobo Lomuntu Okufanele Ube ukukhanyisa uhlelo uba nezikhukhula ukuze aphuphuthekise isakhiwo unyezi, futhi ntambama it is ebenyezeliswa imisebe yelanga.
Sekungamakhulu eminyaka emithathu, Abu Dhabi libuswa umndeni Al Kazemi, futhi enza kahle kakhulu. Umuzi ikhuphuke kakhulu kule minyaka engamashumi amabili ngenxa kabusha imizana eseduze. Centre of inhlokodolobha UAE eliseduze bay, kodwa omakhelwane zezimboni esisuka kude empumalanga enyakatho kuya ezingwadule. Ekhatsi Abu Dhabi, ngokuthula ukuhlangana nezitolo ezinkulu yesimanje kanye izikhungo ibhizinisi mosque lasendulo, izimakethe zaseMpumalanga kanye iminyuziyamu. Futhi, kukhona ubuciko nasezikhungweni zamasiko, iminyuziyamu, izikhungo zemfundo.
Kokusungulwa edolobheni lunikezelwe yetinsita enhle. Uma abazingeli bahlangana nensephe, bamxosha wakhe. isilwane Long wabaleka benqamula ogwadule, engashiyanga ithemba ukubaleka abawasukelayo yakhe kuze kube saphelelwa ogwini of Gulf. Khona-ke yiba njengensephe luhlangabezane amanzi, kodwa hhayi waminza, kodwa wathola ezibukweni wawela elalibhalwe lesi siqhingi, i-abazingeli axoshwe izithende zakhe, ngakho bamangala kakhulu lapho isisulu wabayisa nomjikelezo wamanzi. Abantu abazange bayibulale isilwane, futhi osungulwe settlement lapha, okwakubizwa ngokuthi i uyise ensephe, ukuthi kuzwakala Abu Dhabi.
Izithombe inhlokodolobha yase-United Arab Emirates bazongena esitelekeni ubuhle babo, inhlanganisela eMpumalanga naseNtshonalanga. Kodwa kuphela wavakashela lapha, kangizange ngiphuze shí emkhathini, ukufunda isiko kanye namasiko abantu, ungabona indlela enhle kulo muzi.
E50M tank (Hyde) izici, izinzuzo
Indlela yokutshala truffle: ubuchwepheshe, imihlahlandlela
Indzaba-incazelo ka-ekamelweni lakhe: isimiso elula yokudala umbhalo